Mucaaradka Suuriya oo Heshiis Xabad Joojin Guud Ah la Saxiixday Dowladda Ruush-ka.
Thursday December 29, 2016 - 17:19:48 in Wararka by Super Admin
Dowladaha Turkiga iyo Ruushka ayaa ku dhaawaqay in Heshiis guud oo Xabad Joojin ah uu ka dhaqan gelayo inta badan furimaha dagaalka ee gobollada dalka Suuriya.
kooxda Axraaru Shaam ayaa kamid ah kooxaha mucaaradka ah ee Heshiiska saxiiday
Kadib kulan ballaaran oo kooxaha mucaaradka dhax-dhaxaadka ah iyo dowladda Ruushka ku dhaxmaray magaalada Ankara ayaa lagu heshiiyay xabad joojin ah iyo in la yareeyo cadaawadda dhinacyadaasi u dhaxaysa.
Dowladaha Turkiga iyo Ruushka oo garwadeen ka ah Heshiiska ayaa ku dhawaaqay in Xabad joojinta ay ka dhaqan geli doonto dhammaan gobollada Suuriya marka laga reebo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay maamulaan xoogaga Jihaadiga ah ee ku sumadaysan liiska waxa loogu yeero ‘Argagaxisada’ sida Jabhadda fatxu Shaam Ex.Jabhadda Alnusrah.
Dhinaca kale Bayaan kasoo baxay Taliska ciidanka Melleteriga Dowladda Suuriya ayaa lagu sheegay in heshiiskan looga gol-leeyahay in xal siyaasadeed lagusoo gaba gabeeyo dagaalka Suuriya.
Maamulka Bashaar Al-asad ayaa dhammaan mucaaradka qunyar socodka ah ee Suuriya ka dagaallamaya ugu baaqay in ay fuliyaan heshiiska ayna ka qeyb galaan wadahadallo kama dambeys ah oo todobaadka soo socda ka furmi doona wadanka Khazakhistaan.
in ka badan 60-kun oo kamid ah mucaaradka Suuriya ayaa saxiixay Heshiiska Ankara ee xabad joojinta ah, dhammaan kooxaha wadahadallada ka qeyb galay ayaa taageera dhaqaale iyo mid melleteri ka hela dowladaha Khaliijka Carabta iyo Turkiga.